Abaabulka banaanbaxyo xoogan oo maanta ka dhacaya degaano ka tirsan Hirshabeelle | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Abaabulka banaanbaxyo xoogan oo maanta ka dhacaya degaano ka tirsan Hirshabeelle
Abaabulka banaanbaxyo xoogan oo maanta ka dhacaya degaano ka tirsan Hirshabeelle
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacaan degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Hiiraan, kaas oo looga soo horjeedo arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle.
Meelaha la filaayo ay banaanbaxyadan maanta ka dhacaan ayaa waxaa kamid ah magaalooyinka, Beledweyne, Buulo-burde, Jalalaqsi, Maxaas, Feer Feer Iyo Matabaan oo ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay muujinayeen walaac ay ka qabaan isbedel lagu sameeyay hanaankii awood qeybsiga Hirshabeelle lagu dhisay, xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in xilka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Afartii sano ee la soo dhaafay ay soo qabteen Madaxweynayaal kaso jeeda gobolka Hiiraan loo soo wareejinayo dhanka Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Mid kamid ah dadka qaban qaabiyaya banaanbaxa ayaa sheegay in uu yahay mid nabadeed, isla markaana looga soo horjeedo dhismaha cusub ee maamul Goboleedka Hirshabelle.
Maalin ka hor Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Coosble oo ka hadlayay shir ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in haddii aan wax laga bedelin habka hadda lagu wado dhismaha Hirshabeelle, ay maamul u gaar ah ay ka dhisanayaan Magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Magaalada Beledweyne gaaraan Siyaasiyiin Odayaal Ganacsato iyo waxgarad ka tagaya Magaalada Muqdisho kuwaasi oo la sheegay in ay ka Shaqeyn doonaan dhismaha Maamul la Magac baxay Hiiraan State.